မြစ်ဆုံ: ကျနော် နဲ. ကျနော်. အစ်မ
မောင်မောင် တို. မောင်နှမ တွေက အဒေါ်နဲ. ဘဲ နေရတာများတယ်။
အမေနဲအဖွားက ကျောက်စိမ်းမြေ မှာ ဓျေးရောင်းကြတော. မခေါ်ထားဘူး ။ကျနော်နဲ.အစ်မကို ကျောင်းဆရာ ၊ဆရာမတွေဖြစ်တဲ. ဦးလေးနဲ.အဒေါ် ဆီမှာဘဲ ပညာတတ်အောင်ဆိုပြီးထားတယ်။ သူတို.နှစ်ယောက်လုံးကလည်း အပျို၊ လူပျိုတွေဆိုတော. ကျနော်တို. မောင်နှမတွေကို တူတွေ တူမတွေလိုမဟုတ်ဘဲ သားသမီးတွေလို ချစ်ကြပါတယ်။ ကျောင်းဆရာ ၊ ဆရာမတွေဆိုတော. သိကြတဲအ.တိုင်း လေ အလုပ်ကခပ်များများရယ်။ ကျူရှင်ကလည်း သင်တယ်ဆိုတော. ကျနော်တို. တစ်တွေကိုအားလုံးဒေါင်.စေ.အောင်တော.လိုက်မကြည်.နိုင်ပါဘူး။ စာကိုဘဲကြပ်ကြပ်မတ်မတ်လုပ်လို.ရတယ်။ဒါပေမယ်. စည်းနဲ. ဘောင်နဲ.တော.လွတ်လို.မရဘူး။ ကျောင်းဆရာ ဦးလေးကလည်း ကျောင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး တာဝန်ခံဆရာဆိုတော. ကျနော်တို.ကြောင်. သူ.နာမည်ဘယ်အပျက်ခံမလဲ။ သူလည်း အားကစားနည်းပြ ၊ကာယဆရာ အမျိုးမျိုးသောတာဝန်တွေနဲ. အလုပ်များနေတာများတော. ဒီတော. အိမ်မှာ မောင်နှမတစ်တွေဘဲ ရှိကြတာများတယ်။ ကျနော်.မှာက အကိုမရှိတော. အစ်ကို တစ်ဦး
ရဲ. သွန်သင်ဆုံးမ မှုတွေ ကို တော.မရ ခဲ.ပါဘူး။ အထက်မှာက အစ်မဆိုတော. သိတဲ.အတိုင်းဘဲ လေ။ အစ်မနဲ.မောင်ဆိုတာ တစ်ကျက်ကျက် မဟုတ်လား။ ရန်ဖြစ်နေတာ များတယ်။ငယ်တုန်းကလည်း ငယ်တုန်းမို.လို. အငယ်ကို အနိုင်ကျင်.တယ်ပေါ. --- တကယ်တော. ကျနော်က ပိုအနိုင်ကျင်.တာများတယ်။ အိမ်ကအဒေါ်ကတောင်ပြောရတယ် မင်းမှာ နိုင်စရာ ဒီအစ်မတစ်ယောက်ဘဲ ရှိလားတဲ.။ ဟုတ်တာတော. ဟုတ်တယ် ကျနော်. သူငယ်ချင်းတွေဆို ဘယ်သူမှ မနိုင်ဘူး။ကျနော်က ခံရတာ များတယ်။အဲ.တာ ငယ်တုန်းကပေါ.။ ကြီးတော.လည်း တစ်မျိုးပေါ.-- အစ်မ တစ်ယောက်လုံး ရှိတာတောင် မောင်က ရည်းစားမရှိဘူး- --အဲ.တာ အစ်မအသုံးမကျလို.ဆိုပြီး တစ်ယောက်တည်းသော အစ်မကို ပြောပြန်ရော။ ကိုယ်ရည်စားမရတိုင်း ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင် ငရဲမကြောက် ဘာမကြောက်နဲ. အကြီးကို ဒီအချိန်ထိကို ပြောတုန်း။ ခနလေးပြောတဲ. ဖုန်းထည်းတောင်မှ မောင်နှမ နှစ်ယောက်ရန်ဖြစ်သေးတယ်။ အဲ.လောက်ထိ ကျနော်.အစ်မကို ချစ်တာ။ ကျောင်းတက်တုန်းကဆို အစ်ကိုစီနီယာတွေမေးတိုင်း မောင်မောင် မင်းမှာ အစ်မရှိလားဆို ဘယ်တော. မှ ရှိတယ်လို.မဖြေဘူး။ ရှိရင် ယောက်ဖတော်တော.မှာ --မဟုတ်လား။ အဲ.ဒီတော.လည်း နှမြောပြန်ရော ။ မှတ်မှတ်ရရ ကျနော် ဆယ်တန်းနှစ်တုန်းကအစ်မကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ နောက်ဆုံးနှစ်။ နောက်ဆုံးစာမေးပွဲ ပြီးတော.အိမ်မပြန်လာ ဘဲ တစ်ခြားမြို.က သူ. သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ရဲ. မင်္ဂလာဆောင်ကို လိုက်သွားတယ်။ အိမ်ကိုလည်းအကျိုးအကြောင်းမပြောထားတော. တစ်အိမ်လုံး စိတ်ပူနေကြတာပေါ.။ အားလုံးထည်းမှာ ကျနော်က အဆိုးဆုံးဘဲ။အဲ.အချိန်မှာတော. အစ်မကို တစ်ခုခုဖြစ်သွားမှာ အရမ်းစိုးရိမ်နေခဲ.တယ်လေ။ ဒါနဲ.ကျနော်လည်းသိတဲ. အစ်မ သူငယ်ချင်းတွေကို လိုက်မေးတော.လည်း ဂဂနန မသိကြဘူး။ ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုနဲ. ဒီကြားထည်း တစ်ချို.ကနောက်လိုက်သေးတယ်--- မင်း အစ်မ သူ.ကောင်လေးနဲ. လိုက်သွားပြီ။
--------ဟုတ်လို.လား ဗျာ ကျနော်. ရည်းစားမရှိတာ ကျနော်သိတယ် လျှောက်မပြောနဲ. ကျနော်.အစ်မနာမည်ပျက်တယ်ပေါ.။ အဲ.တော.---- ဟဲ. မောင်မောင် ခုမှ နင်က အစ်မ ကိုချစ်နေတယ် ဟုတ်လား နိုင်စားလို.၀ပြီဆိုတော.မှ ----ဟွန်းမပြောလိုက်ချင်ဘူး-- ခုမှ ဖြစ်နေလိုက်တာ။ ကျနော်လည်း သူ.ရှေ.ကနေ မြန်မြန်ထွက်လာခဲ.တော.တယ်။ ကြာရင် လူသတ်မှု ဖြစ်တော.မယ်--- ( ပုရွတ်ဆိတ်ဒေါသ နဲ.)။
အိမ်ရောက်တော. အဒေါ်က လှမ်းကြိုပြီးပြောတယ် အကျိုးအကြောင်းကို။ အိမ်းနားက ဖုန်းဆိုင်ကို အစ်မ လှမ်းဆက်ပြီး ပြောတာတဲ. ။ အဲ.တော.မှ စိတ်အေးသွားတယ်။
နောက် ကိုယ်စီ အလုပ်တာဝန်တွေနဲ. ဖြစ်သွားတော. တစ်မြို. တစ်နယ်စီ မှာရောက်သွားကြတယ်။ ဖုန်းနဲ.ဘဲ တစ်ခါတစ်လေ ရုံးပိတ်ရက်မျိုးမှ တွေ.ဖြစ်တာ ။ ကျနော်. အစ်မက လည်း ဖုန်းထည်းမှာစကားပြောတာနဲ. တန်းပြီးဆရာလုပ်တော.တာဘဲ-- ။ သူက ကျောင်းဆရာမကို--- တပည်.တွေဆုံမသလို လေသံနဲ. မောင်ကိုလည်း ဆုံးမတာပေါ.။ အစ်မကတော. အဒေါ် ဦလေးတွေရဲ.ခြေရာကို တစ်ထပ်တည်းနင်းနိုင်ခဲ.တယ် ။ ကျနော်. ကိုတော
. မနင်းခိုင်းတော.ဘူး တစ်မျိုးလုံး ကျောင်းဆရာ/မတွေ ဖြစ်သွားမှာစိုးလို.တဲ.။ အဲ.တော.လည်း ဘယ်ရမလည်း မြန်မာ.သားကောင်းဇာနည် စစ်သားကြီးကို ကျနော်ရည်မှန်းသည်ပေါ. ။
ခုတော. အစ်မကို သတိရပြန်ရော။ ရန်ဖြစ်စရာ အနားမှာ မရှိလို.တော.မဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တော. သူဆုံမတာလေးတွေက ကျနော်. လိုအပ်ချက်တွေကို အမြဲထောက်ပြနေတာပါ။ခုမှ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ပညာတော်သင်မောင်မောင် တစ်ယောက် အိုးနင်းခွက်နင်း ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ရတော.မှ ငယ်ငယ်က အစ်မ ချက်တာ အဆင်သင်.စားခဲ.တာ တွေကို တွေးပြီး တမ်းတနေပြီ။ နောက်ဆုံး အစ်မဆိုတာ အမေတစ်ယောက် နဲ. အတူတူပါဘဲလို. ကျနော် ထင်မိတယ်။
Posted by မောင်မောင် at 00:17
အခုရော အမကဘယ်မှာလဲ..မြစ်ဆုံရော ဘယ်မှာလဲ
31 August 2011 at 10:35
ဟုတ်ကဲ. ကျေးဇူးပါဘဲ အစ်မ jasmine ရေ ၊ ခု အစ်မက နမ္မတီးမြို.မှာ ကျောင်းဆရာမ လုပ်နေပါတယ်။
31 August 2011 at 16:39